I-China ityhila uyilo lweembasa zeOlimpiki zaseBeijing zowama-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » I-China ityhila uyilo lweembasa zeOlimpiki zaseBeijing zowama-2022
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Sports • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-China ityhila uyilo lweembasa zeOlimpiki zaseBeijing zowama-2022.
Ebizwa ngokuba yi-“Tongxin”, elithetha ukuthi “Ndawonye njengenye”, iimbasa zinezangqa ezintlanu eziquka intanda-bulumko yaseTshayina yokuvisisana phakathi kwezulu, umhlaba kunye nabantu.
Ukutyhilwa kweembasa kuphawule ukubalwa kweentsuku ezili-100 ukuya kwiMidlalo.
Ukusingatha ngempumelelo ii-Olimpiki zeHlobo zowama-2008, iBeijing kungekudala iza kuba sisixeko sokuqala ukwenza imiboniso yemidlalo yasehlotyeni nasebusika.
Abaququzeleli be-Beijing ka-2022 baye bagxininisa impilo kunye nokhuseleko lwabathathi-nxaxheba njengento ephambili kubo.
Ngaphantsi kweveki emva kokuba ilangatye le-Olimpiki lifikile e-China emva kokuba lilayishwe kwi-Olympia yaMandulo, eGrisi, EBeijing ngo-2022 Uyilo lweembasa zeOlimpiki lutyhilwe namhlanje.
iTshayinaIsixeko esilikomkhulu sibhiyozele usuku lwe-100 lweentsuku ukuya ezantsi Imidlalo ye-Olimpiki yasebusika ye-2022 ngoLwesibini nenye isiganeko esibalulekileyo njengamalungiselelo EBeijing ngo-2022 ukuya kwinqanaba labo lokugqibela.
Ebizwa ngokuba yi-“Tongxin”, elithetha ukuthi “Ndawonye njengenye”, iimbasa zinezangqa ezintlanu eziquka intanda-bulumko yaseTshayina yokuvisisana phakathi kwezulu, umhlaba kunye nabantu. Amakhonkco nawo afanekisela amakhonkco eOlimpiki, akrolwe kwisangqa sangaphakathi, kunye nomoya weOlimpiki odibanisa umhlaba ngemidlalo.
Uyilo lwembasa luphefumlelwe kwiqhekeza lejadeware yaseTshayina ebizwa ngokuba yi "Bi", idiskhi yejade ephindwe kabini kunye nomngxuma ojikelezayo embindini. Kanye njengokuba ijade icingelwa njengesihombiso esinqwenelekayo nesixabisekileyo kwinkcubeko yamaTshayina, imbasa ibubungqina bembeko nemizamo engapheliyo yabadlali.
Ngobhubhani we-COVID-19 usagquba kwiindawo ezininzi zehlabathi, EBeijing ngo-2022 abaququzeleli baye bagxininisa impilo kunye nokhuseleko lwabathathi-nxaxheba njengeyona nto iphambili kubo.
Ushicilelo lokuqala lweencwadi zokudlala zaseBeijing ngo-2022 zapapashwa ngoMvulo, zibonelela ngesikhokelo kwiimbaleki kunye namagosa ukuqinisekisa ukuba iMidlalo yeOlimpiki yaseBusika kunye neMidlalo yeParalympic inokuhanjiswa ngokukhuselekileyo ngexesha lo bhubhani.
Iincwadi zokudlala ezimbini, enye iyeyeimbaleki kunye namagosa eqela, kwaye enye yeyabo bonke abanye abachaphazelekayo, ijongana nemilinganiselo ephambili ye-COVID-19, kubandakanywa nolawulo oluvaliweyo, ugonyo kunye novavanyo.
Njengoko bekubhengezwe ngaphambili, bonke abo bagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19 abayi kudinga ukuvalelwa bodwa kangangeentsuku ezingama-21 xa befika apho. iTshayina kwaye endaweni yoko angangenisa "inkqubo yolawulo evaliweyo". Abo bangaphakathi kwinkqubo yolawulo oluvaliweyo baya kuvavanywa yonke imihla i-COVID-19.
Uhlelo lwesibini lwePlaybooks lumiselwe ukupapashwa ngoDisemba.
Ukusukela nge-5 ka-Okthobha, uthotho lokhuphiswano lwezizwe ngezizwe luye lwenzeka kwi-Oval yeSizwe ye-Speed ​​Skating Oval kunye ne-Capital Gymnasium edolophini e-Beijing, kunye neZiko leSizwe lokutyibilika eYanqing ukuvavanya imisebenzi efana nokwenza umkhenkce, ixesha kunye nokukora, isiqulatho se-COVID-19. , ukhuseleko kunye nezothutho.
Isenzo sikaNovemba siza kubona umdlalo weNdebe yeHlabathi yeLuge elandelwa yiminyhadala yeNdebe yeHlabathi ye-snowboarding kunye ne-freeski cross, kunye neminyhadala yeNdebe ye-Continental yokutsiba kunye neNordic edibeneyo ecwangciselwe ngoDisemba.
Kuqikelelwa ukuba malunga nama-2,000 eembaleki zaphesheya kunye nabasebenzi abaxhasayo ababandakanyekayo kwimisitho yovavanyo, evumela abaququzeleli kwizixhobo zovavanyo kunye nokusebenza ngaphambi kweBeijing ka-2022.